”shaarguduud waxa uu ku soo laaban karaa Baydhabo isagoo sheeganayn wax xil ah” C/laahi Axmed Black
C/laahi Axmed Black oo ah aasaasayaashii ururka RRA ayaa waxa uu sheegay in shaargaduud uu ahaa ninkii qaska ka dhex abuuray RRA-da gudaheeda,isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay inuu ahaa ninkii mas`uulka ka ahaa dagaalkii ka dhacay gobolada Bay iyo Bakool .
C/laahi Black oo u waramayey qaar ka tirsan saxaafada Muqdisho isagoo jooga magaalada Baydhabo,ayaa waxa uu sheegay in Shaargaduud uu ka soo horjeestay talooyinka wax-ku-oolka ah ee ay u soo jeediyaan qaar ka tirsan guddiga fulinta RRA-da iyo labadiisa gudoomiye-ku-xigeen,taasoo mar hore uu ka dhega-adeegay islamarkaasna uu dhisay maamul gacan-ku-rimis ah oo isaga hoos taga,waa sida uu hadalka u dhigayee.
Black oo mar wax laga weydiiyey xaaladdaha magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba waxa uu sheegay in jawiga uu haatan xasiloon yahay, labada magaalana ay joogaan ciidamada RRA-da. Xaaladda magaalada Buurna mar uun ka hadlayey waxa uu tibaaxay in Buurhakaba ay tahay magaalada keliya ee aan wax dagaal ahi ka dhicin illaa iyo markii xiisadahu ka dhex aloosmeen Col.Shaargaduud iyo labadiisii ku-xigeen,haatana buu yiri ay u heelan yihiin dadka ku dhaqan Buurhakaba inay mar kale hantaan nabada .
“shargaduud waxa uu ku soo laaban karaa Baydhabo oo keliya isagoon huwanayn magac madaxweyninimo haddii uu magacaasi sii watana waxa uu dhaxli doonaa dhibaato hor leh”sidaasi waxaa yiri Black oo intaasi sii raaciyey in ay dhinacooda ku dadaali doonaan nabada iyo wada jirka dadka dega gobolada Bay iyo Bakool.